Mhuri Mould, Kicheniware Mould, Crate Mould - HEYA
Heya Mould inosimbirira mukugadzira mhando yepamusoro uye yepamusoro mapurasitiki epurasitiki, ayo ari nyore kushanda nekuchengetedza vatengi.
Heya Mould inogona kusangana nezvinodiwa nevatengi kuburikidza nekugadzirisa kuita kwehunhu hwakagadziriswa uye imwechete-yekumira mhinduro.
Heya Mould ichagadzira nekugadzira zvigadzirwa uye mafuru sekukumbira kwevatengi kuvabatsira kuchengetedza mutengo wemapurojekiti matsva, kuita kuti bhizinesi ravo riwedzere purofiti uye riwedzere gohwo.
Heya Mould inotora akasiyana siyana epamberi ekugadzirisa michina, inosanganisirwa nehupfumi ruzivo mukugadzira mapurasitiki epurasitiki, ichiongorora yakafanira uye yakagadzikana muforoma yevatengi.
HEYA MOLD iri nyanzvi mukugadzira mapurasitiki epurasitiki makore anopfuura gumi, senge zvigadzirwa zveimba, zvigadzirwa zvekicheni, imba yekushandisa imba, maindasitiri uye zvekurima zvivakwa uye zvichingodaro. customization uye nenguva kufambira mberi ”sezvo chinoumba ukoshi, kupa vatengi yepamusoro epurasitiki anoumba pamwe chete-vanorega muforoma mhinduro.